Chelsea Oo Iska Diiday Robert Lewandowski Ka Hor Inta Aysan Dib Ula Soo Saxiixan Romelu Lukaku
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo iska diiday Robert Lewandowski ka hor inta aysan dib ula soo saxiixan Romelu Lukaku
August 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay diiday fursad ay kula wareegi laheyd xidiga Bayern Munich ee Robert Lewandowski ka hor inta aysan dhameystirin heshiiska Romelu Lukaku .
Blues ayaa ku dhawaaqday soo laabashada Lukaku fiidnimadii Khamiista, iyadoo xiddiga reer Belgium uu dib ugu biiray kooxda reer London heshiis rikoorka kooxda ah oo ku kacaya £ 97.5m.
Sida laga soo xigtay Bild , wakiilka Lewandowski Pini Zahavi ayaa Chelsea u soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karaan Lewandowski xagaagan, laakiin kooxda Thomas Tuchel ayaan diyaar u ahayn inay bixiso qiimihiisa £ 68m.
Erling Braut Haaland ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa bartilmaameedka weerarka dhexe ee Chelsea xagaagan, laakiin Borussia Dortmund ayaa diiday inay iibiso xiddiga reer Norway.
Lewandowski ayaa weli waxaa u harsan labo sano qandaraaskiisa Allianz Arena, wuxuuna shabaqa soo taabtay 48 jeer 40 kulan oo uu u saftay heer kooxeed.
Dhanka kale, Lukaku ayaa ka tagaya Inter Milan isagoo dhaliyay 64 gool labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, 28 jirkaan ayaa dib ugu soo laabtay kooxdii uu horay u matalay intii u dhaxeysay 2011 iyo 2014.